IWordPress kunye neMySQL: Lithini iLizwi lakho kwiLizwi? | Martech Zone
NgoLwesibini, Agasti 26, 2008 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Kukho intetho kwiiblogi malunga nobungakanani obuqhelekileyo besithuba seWordPress. Olunye ukhanyiso luye lwakhanyiswa ukuba ii-Injini zokuKhangela ziya kuthi zilinganise ifuthe lokuqala x inani labalinganiswa, apho u-x okwangoku engaziwa. Ngenxa yoko, nantoni na emva koko yinkcitha yamagama.
Umfanekiso ukusuka Amazwi!
Ndingcono ukuba ndonwabe ngeposi zam zebhlog ukuze ndenze uhlalutyo olongezelelekileyo kwaye ndibone ukuba ukuthandwa kwesithuba kwiziphumo zophando kunalo naluphi na unxibelelwano isibalo samagama. Andizukufumana isayensi kakhulu, kodwa ndifuna ukujonga nzulu.
Ndingabuza njani i-WordPress kubalo lwamagama?
I-MySQL ayinayo eyakhelwe-ngaphakathi eyokubala amagama ye-MySQL, kodwa njengayo yonke eminye imibuzo engaphendulwanga, umntu othile okrelekrele kwi-blogosphere sele ephendulile ukuba uyisebenzisa njani i-MySQL ukufumana ubalo lwamagama.
Nanku umbuzo wombhali wokubala uguqulwe kwiziko ledatha leWordPress:
KHETHA`ID`, `post_date`,` post_type`,
IQELA NGU `ID`
UKUBA `post_type` = 'post' NO` post_status` = 'publish'
UKUYALELWA NGU `post_date` DESC
UMDA KUNYE, 0
Okwangoku andibhalisi 'kubungakanani beposi ogqibeleleyo' kuba eyona nto ibonelela ngesisindo ngenjini yokukhangela ayisiyo nje ukubala kwamagama, kodwa inani lamakhonkco kuloo mxholo. Ukuba unamagama angama-2,000 XNUMX athumela umtsalane kunxibelelwano oluninzi, emva koko ubungakanani obufanelekileyo beposi yakho yayingama-2,000 amagama.
tags: mysqlinani lamagamasqlisibalo samagamaWordPressmagama
Aug 27, 2008 ngo-2:21 PM
Ngenxa yoko, nantoni na emva koko yinkcitha-xesha nje yamagama.
Ewe, nje ukuba ubhalela uGoogle, hayi abafundi bakho… 😉
Agasti 28, 2008 kwi-12: 26 AM
Kukho iplagin ebizwa ngokuba yi "Blog Metrics" ekuxelela ukubalwa kwamagama aphakathi kwizithuba zakho zeblogi njl. Kutheni ungazami oko?
Sep 11, 2011 kwi-5: 54 AM
Ndibhala ndide ndiyifumane ingongoma yam. Ndicinga ukuba bubudenge ukuba abantu abathenga umxholo basongelwe ngokubalwa kwamagama.
Sep 11, 2011 ngo-6:28 PM
Casey - Ndivumelana nawe ngokupheleleyo. Ndicinga ukuba kukho amathuba okusebenzisa imifanekiso kunye namanqaku eebhulethi ukutsala abantu ukuba bafunde umxholo, kodwa ndibhala ndide ndicinge ukuba inqaku lenziwe… kwaye ndizama ukungaphindi okanye hayi ngaphantsi.